Ọtụtụ n'ime anyị nwere ihe karịrị otu smart ngwaọrụ now a ụbọchị, iPads ịbụ otu n'ime ha. iPad ọrụ bụ n'ozuzu nchegbu banyere selata nke ha iPad mgbe a ụfọdụ oge. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ndị dị iche iche ihe mere ụfọdụ n'ime ndị na onye ọrụ metụtara ndị ọzọ nwere ike ịbụ n'ihi na ụfọdụ ngwaike ma ọ bụ software malfunctioning. Ụfọdụ n'ime ihe nkịtị mere maka selata nke onye iPad agụnye:
iOS updates- iOS mmelite, nwere ike ime ka arụmọrụ efefe eme ngwaọrụ ịkụda. Mgbe ụfọdụ, ọhụrụ iOS update-aghọ ukwuu nke a ibu arọ agadi processor N'ihi ya ọ na slows ala ngwaọrụ.
Apps- égwu eri niile ngwaọrụ tinyere iPads, ndụ batrị na arụmọrụ. Wụnye a dum ụyọkọ nke ngwa ka ị ghara ọbụna-eji nwere ihe oghom mmetụta bụghị naanị na ebe nchekwa nke iPad ma ya ịrụ ọrụ dị ka a dum.
Batrị degradation- mgbe ụfọdụ, arụmọrụ umuihe bụ naanị n'ihi na eziokwu na batrị nke gị iPad nwere ike agaghịkwa akwadokwa ego nke nhazi na o nwere aka.
Memory- Ọ bụrụ na gị iPad ka na-agba ọsọ nke na ebe nchekwa ma ọ bụ na verge nke na-agba ọsọ nke ebe nchekwa, ọ ga-akwụsịlata ma ya ịrụ ọrụ ga-apụta ìhè na degrade.
Olee otú ntọt iPad Wi-Fi ọsọ
Ọnụ na Wi-Fi ọsọ nke gị iPad nwere ike ịbụ n'ihi a dum ọtụtụ nke mbipụta. Ụfọdụ n'ime ndị a na-agụnye:
Malfunctioning Router- Lelee ị rawụta maka abnormalities. Malitegharịa ekwentị ya na isi na n'elu ka YouTube iji lelee ụfọdụ Nkuzi na isiokwu.
Signal interfering Case- Ụfọdụ na-echebe ikpe na-wuru nke ihe na-ahụ maka Wi-Fi mgbaàmà nnyonye anya nke utịp ke a iji nwayọọ Wi-Fi ọsọ. Were kwụsịrị bụrụ na ego ma ọ bụrụ na ọ na-eweta mma nke Wi-Fi ọsọ.
Na-ezighị ezi DNS Settings- Mgbe ụfọdụ DNS ntọala na-ahụ maka iji nwayọọ Wi-Fi ọsọ. Melite DNS aka na gị iPad dozie nsogbu. N'ihi na nke a na-aga Settings Wi-Fi. Kpatụ "m" icon aka nri nke gị Wi-Fi netwọk si aha. Gbadaa na ịchọta "DNS" na-abanye na ma na adreesị "8.8.8.8; 8.8.4.4 "," 208.67.222.222 "ma ọ bụ" 208.67.220.220 "na-enweghị ruturu. Malitegharịa ekwentị ahụ na Wi-Fi na ekwentị gị.
Otú iji melite iPad arụmọrụ
iPad si n'ozuzu arụmọrụ nwere ike mma site na-eso ndị n'ozuzu nzọụkwụ:
Emelite ka ọhụrụ femụwe.
Iwepu ejibeghi ngwa.
Gwakwara elu ohere na ebe nchekwa site ịlụ Bibie ochie ozi na site shifting ochie foto na vidiyo na gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa onwe elu ebe nchekwa ohere.
Ikpochapụ nchọgharị cache.
Gbanyụọ ọnọdụ ọrụ.
Rụọ iPad arụmọrụ site na iji Wondershare SafeEraser
Wondershare SafeEraser bụ onye nwere ọgụgụ isi ngwá ọrụ na-eme niile ihicha nke ngwaọrụ gị n'ihi na ị na nanị otu click. Wondershare SafeEraser bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na na iTunes 12.1, iOS 9.0, iPhone 6s na iPhone 6s Plus na dị ka a free iri atọ ụbọchị ikpe kwa. Ọ na-ewe elekọta niile junk faịlụ ahụ nwere ike ịbụ ugbu a na gị usoro unwantedly na deletes niile faịlụ nwere ike na-ezo na-elu ohere na ebe nchekwa. Wondershare SafeEraser bụ dakọtara na ma Windows na Mac ịwa usoro.
Wondershare SafeEraser nwere ndị na-esonụ atụmatụ:
Doro Anya Private Data
Ihichapu ngwaọrụ gị-adịgide adịgide
Doro Anya ratụ ratụ File na Uninstall égwu
Na-adịgide adịgide ihichapu 'Ugbua ehichapụ faịlụ'
Mpikota onu Photos iji naputa Nchekwa maka Ngwaọrụ
Nyak ọzọ ohere gị iPad iji Wondershare SafeErase, download na wụnye Wondershare SafeEraser gị na kọmputa na laptọọpụ. Chere maka echichi mezue na ẹkedori ngwa na kọmputa gị ma ọ laptọọpụ. Jikọọ gị iPad na kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ site n'ọnụ eriri USB na gaba dị ka eduzi n'okpuru.
Express nzacha na mkpocha
Chọpụta "1-Click nzacha na mkpocha" nhọrọ si isi window.
See "1-Pịa nzacha na mkpocha" bọtịnụ na Wondershare SafeEraser ga-eme a ngwa ngwa Doppler nke ngwaọrụ gị n'ihi na ị na-agwa gị ngụkọta ego nke junk faịlụ ugbu a na gị iPad Ozugbo Doppler zuru ezu. Họrọ faịlụ na ị chọrọ tufuo site n'inyocha ha kwekọrọ ekwekọ ego igbe. Pịa "nzacha na mkpocha" nọgide na.
Wondershare SafeEraser ga-egosipụta cleanup results mgbe e mere ya nhicha junk faịlụ site na gị iPad.
Chọpụta "Photo Compressor" nhọrọ si isi window na pịa ya. Wondershare SafeEraser ga-ahụ na-amalite ịgụ isiokwu ị iPad maka foto dị mkpa ka a abịakọrọ.
Ozugbo Doppler zuru ezu, Wondershare SafeEraser ga-egosipụta gị niile foto. Ha niile ga-enyocha ndabara nke pụtara na ndabara ha niile ga-abịakọrọ. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka ha nile na-abịakọrọ, ị pụrụ nanị uncheck ụfọdụ. Pịa "Malite" mgbe ị na-mere.
Tupu n'ezie-amalite mpikota onu photos, ị nwekwara ike pịa isi NchNhr na ntọala si na n'elu nri akuku nke usoro ihe omume, ma họrọ a kwachie ndabere gị mbụ photos. Nye a kwesịrị ekwesị ụzọ na họrọ "Na".
The mkpakọ usoro ga-amalite. Ozugbo ọ zuru ezu, Wondershare SafeEraser ga-egosipụta mkpakọ results maka gị. Ị ga-adị mfe-enwe ike achọpụta ihe dị iche n'etiti ohere a na-eji site foto tupu mgbe mkpakọ.
Otú nyefee Video si iPad ka iPad
> Resource> iPad> Olee Imeziwanye iPad Speed